Vavaka hisarihana lehilahy. ? Haingana sy amin'ny saina.
Vavaka mba hahasarika lehilahy iray Mety ho manakiana be izany nefa dia tena mandaitra ary mahery.
Vavaka izay tsy natao hataon'ny vehivavy manokana, na dia ireo aza no tena mampiasa io fitaovam-piadiana io hiadiana amin'ny fifankatiavana izay mila fidiran'Andriamanitra.
Marihina fa tsy ilaina ny hanantena ny hiharatsy ny fifandraisan'izy ireo tanteraka hanao izany vavaka izany saingy azo atao avy amin'ny soritr'aretina voalohany fa tsy mandeha tsara ny zavatra.
1 Vavaka hisintonana lehilahy haingana
2 Ny vavaka hianjera amin'ny lehilahy miaraka amin'ny saina
3 Vavaka ho famoizam-po ataon'ny lehilahy iray segondra
3.1 Inona ary ity vavaka ity?
3.2 Azoko lazaina ve ny vavaka rehetra?
Vavaka hisintonana lehilahy haingana
«Fanahy Masina, ianao izay mahalala mihoatra ny olona rehetra ny tanjaky ny fanahiko ...
Miangavy anao aho mba hanatrika ny fangatahako, fa amin'ny herinao no anaovanao ahy hanatona (anaran'ny malalanao), dia mahatsapa io olona tsara toetra io aho ary ho voasarika eo anoloan'izy ireo, mangataka aminao aho, Andriamanitra Masina hiondrika ny sitrapony ary ny faniriany ho anilako
Jereo aho ary tsapao ny fitiavako sy ny fanolorako azy ho azy.
Fanahy Masina malala, mpitondra fanahy, mangataka aminao aho hanantona ahy, mangataka fanampiana mafy aminao aho hamaly ny vavako ...
Manontany anao aho fa ny fitiavany dia tsy miraika amiko intsony, tsy manalavitra ahy izy, vonona ny hiresaka amiko foana izy, ary ny angovo miray tetika amiko fotsiny ...
Manontany anao aho, enga anie ny olona tia anao manatona ahy ary enga anie ny herintsika ho iray, enga anie ny herinao ho ilay manatevin-daharana ahy amin'io lehilahy tiako io.
Ho an'ny fanavotana masina an'ny fitiavana malala fanahy masina any an-danitra, omeo ahy ny hery ilaina hitia ahy io olona io, fantatrao ny fanahinay ary anio no fotoana hampiarahanareo azy ireo ...
Mampanantena anao amin'ny foko aho fa tia azy, izany (olon-tiana) ho faly amiko foana izy, tsy hanan-java-mahory mihitsy na tsy malahelo ao am-pony raha miankina amiko izany.
Fanahy masina aho izao mangataka aminao amin-kafanam-po lehibe ho an'ny fitiavanao sy ny fiarahana aminao. Amena "
Ny faniriantsika dia ny tokony ho tanjaky anaty izay mitarika antsika hanontany mafy hoe inona no mandoro toy ny lelafo velona ao anatintsika.
Ilay dia hiverina haingana iny lehilahy iny Izy io dia manome antoka antsika fa afaka mahatsapa mora kokoa ny fahatsapana an'ity lehilahy ity satria tsy nanam-potoana ho feno fahalotoana amin'ny fony isika, satria mety hanakana na hanakantsakana ny tanjona tiantsika hatao.
Tsy fahafaham-po na faniriana teraka avy amin'ny fireharehana fa momba ny fanavotana trano, fianakaviana, fifandraisana iray izay tandindomin-doza ho faty mandrakizay.
Raha toa ny iray amin'ireo olona roa ireo dia mbola te-hitohy io fifandraisana io dia azo atao daholo ny zava-drehetra.
Ny vavaka hianjera amin'ny lehilahy miaraka amin'ny saina
«Tonga eto amintsika ny vanim-potoanan'ny fitiavana.
Nifoha indray ny fo nambarako ny zon'ny lahimatoako ary miara-miasa amin'ny tenako manokana, ny fahafahako tsy mitia sy miaina ao anatin'ny famihinana feno fitiavana.
Nanana olana tamin'ny fitiavana aho taloha.
Diso fanantenana aho.
Voa mafy ny foko. Indray mandeha aho irery, tezitra, tsy sambatra, malahelo ary manahy.
Nino taloha aho fa tsy mety ny mahita fitiavana marina sy maharitra ary manohina sy mahery.
Fa misafidy ny hanasitrana an'io aho izao.
Misafidy ny fitiavana aho ary misafidy ny hahita ny fitiavako marina.
Safidy vaovao no andraisako ny fahadiovan'ny foko sy hifandraisako amin'ny fitiavana lalina sy mampihetsi-po. "
Amin'ireny fotoana ireny no hisalasalana ny hatsarantsika na amin'ny toerana misy antsika tsy manana fifandraisana ara-batana amin'io lehilahy io isika Azontsika atao ny manao an'io vavaka mahery io mba hahafahan'ny alàlan'ny fifandraisana ara-tsaina na ara-panahy izay vao manomboka mitombo ny fahatsapana fitiavana.
Izy io dia afaka miasa any amin'ireo fifandraisana ireo eny lavitra eny, ny fitazonana ny sain'io lehilahy mieritreritra foana antsika io dia afaka manampy be dia be ary afaka mampisy azy latsaka tsy misy fanantenana ao anatin'ny fitiavana.
Vavaka ho famoizam-po ataon'ny lehilahy iray segondra
«Fanahy tsy matoky tena mahery, mangataka aminao aho anio mba hanampy ahy, ny famoizam-po nivadika ho fanahy, androany miantso anao aho, fanahin'i Don Juan da Conquista tongava hanampy ahy, fanahim-pitiavana, manatona ahy, fanahin'i Masindahy John mpitrandraka, mihazakazaka ho fanampiana ahy, fanahy mahery amin'ireo rivotra efatra, lalana ary toerana.
Herin'ny fanahy mahery sy marina an'i Saint Mark of Leon, mahery sy tezitra Saint Marta, fanahy ratsy avy any Saint Helena avy any Jerosalema.
Fanahin'ny Masin'ny Saint-bort de Horta, Fanahin'i Maria Loha, fanahy manavotra an'i Horta, fanahy feno hatsaram-panahy sy fahamoram-panahy, anio dia mangataka fanampiana anao aho, dia miangavy ary manome baiko anao hanampy ahy.
Tompon'ny fahatsapana dimy, ny eritreritra momba ny fitsarana, ny sitrapo ary ny fanahy velona, ​​anio dia manontany anao aho, hanampy ahy tompoko: (anaran'io olona io) Manontany ny olo-masin'ity andro ity aho.
Manontany ny olo-masin'ny andro nahaterahan'ity olona ity aho ary ny andron'ny olo-masina nahaterahako.
Ilay anjeliko mpiambina, amin'ny anjelin'ny mpiambina azy.
Ataoko mandrehitra ity labozia ity fa raha tsy ao an-tsainy, dia tsy misy zavatra tsy tafiditra ao amiko, fa ny vatany no mila ahy, ny lehilahy ara-piraisana aminy ihany no mampihetsi-po ahy, fa ny loha ihany no mihevitra ahy, fa ny tanany ihany no te hikasika ny vatako, ny ny tongotra te-handeha amiko, fa ny sainao sy ny fitsarana anao irery ho ahy.
Omeo hery aho mba hifehezana ny sitrapony, izay (anaran'ny olona fotsiny) dia mieritreritra ahy fotsiny, maniry ahy ary maniry azy irery ihany, na olo-masina dia mangataka azy ihany aho hanampy ahy sy hanome ahy ny fitiavany satria mendrika izany aho. ”
Vavaka io ka tsy maintsy atao amim-pahombiazana ary ho fantatra fa olana saro-pady izay hanontaniantsika izany.
Maniry lehilahy ary koa Ny hahatratrarana izany ao anatin'ny segondra fotsiny dia mila apetrakay amin'ny herintsika rehetra ny herintsika rehetra ary ny tena zava-dehibe dia ny hangatahinay amin'ny fahalalana fa ny zavatra ilaintsika dia azo amin'ny alàlan'ny fanaovana izany vavaka izany.
Mahery ny finoana, satria miankina amin'ny mahomby izany ary izany ny vavaka rehetra fa tsy afaka manao na inona na inona hangatahintsika isika.
Vavaky ny famoizam-po ataon'ny lehilahy iray segondra raha miasa izy ireo ary mahery be.
Tsy momba ny ody na ny ozona izay mihatra, na koa tsy mitady ny hanapaka ny feon'ny fieritreretan'ny olona hafa amin'ny alalantsika, ny zavatra angatahinay dia ny hoe ity lehilahy ity dia afaka mahita ny toetra rehetra ananantsika ary lasa adala noho ny miaraka amintsika.
Ity sy ny vavaka hafa rehetra dia manompo zavatra maro, ny iray amin'izy ireo manerantany dia ny mitazona ny finoantsika hatrany.
Amin'ity tranga manokana ity dia afaka mahazo fangatahana manokana isika.
Zava-dehibe ny hitadidy fa afaka manao io vavaka io amin'ny sehatra ivelany toa an'izao rehetra izao na Andriamanitra hafa fa afaka manao azy io amin'ny tenantsika ihany koa isika.
Ny zava-dehibe dia ny miaina fifandraisana manokana miaraka el tontolo ara-panahy izay iadiana ny tena ady.
Azontsika atao ny mangataka ny fifankatiavantsika, ho an'ity lehilahy izay nanalavitra antsika ity ary tsy te-hiverina, dia afaka mangataka fitiavana isika mba ho teraka indray ao am-pony ary te hiverina any amin'ilay trano nafoiny.
Eny, ny vavaka rehetra tadiavintsika dia manintona angovo tsara ho antsika ary manadio ny tontolo ara-panahy izay mihetsika manodidina antsika.
Tombontsoa azontsika atomboka manomboka amin'ny fotoana izao hanombohantsika hanao ny vavaka ataontsika izany.
Ampirisihina hivavaka isan'andro ary hanao izany avy amin'ny halalin'ny fanahy, manaraka fivavaka manokana na mampiasa ny tenintsika manokana ary miaraka amin'ny finoana lehibe.
Manàna finoana amin'ny vavaka mba hahasarika ny fitiavan'olona.